News Collection: काठमाडौं एघार डिग्री
काठमाडौं एघार डिग्री
मनोज दाहाल- वातावरणवादीले 'चिसो एस्ट्रे' भन्ने काठमाडौं उपत्यकामा हरदिन ठिही बढिरहेको छ, क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्ष नजिकिँदै गर्दा सहरको तापक्रम क्रमशः झरिरहेको छ। शुक्रबार बिहान उपत्यकाको तापक्रम आठ डिग्री सेल्सियस थियो। अर्को सातासम्म तापक्रम उत्रिएर पाँच डिग्रीसम्म पुग्ने मौसमविद्हरूको अनुमान छ। पर्यटकले भरिभराउ ठमेल भने अहिले पनि रापिलो छ, युरोपेली र उत्तर अमेरिकी पर्यटककै लागि सही!
किनभने युरोपको चर्चित गन्तव्यमध्ये एक बर्लिनको तापक्रम अहिले जिरोभन्दा तल झरिसकेको छ, पेरिसमा शुक्रबार बिहान जिरो डिग्री आसपास जाडो थियो जुन आउँदो साता माइनसमा उत्रिसक्नेछ। न्युयोर्कमा माइनस तीन, बोस्टनमा त्यस्तै, मन्ट्रियल माइनस छ, रापिलो मानिने म्याड्रिडमा पनि काठमाडौंभन्दा कम, आमस्टर्डममा जिरो हाराहारी। उत्तरी युरोपको त कुरै नगरौं, जाडोयाममा त्यहाँ कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ जिरो डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम होस्!
अनि किन नलागोस् युरोपेली र उत्तर अमेरिकीलाई ठमेल पारिलो?
त्यही न्यानो ठमेलमा शुक्रबार बिहान घाममा ढाड सेकाएर कफी पिउँदै २४ वर्षे जर्मन सुन्दरी आनाले भनी, 'मैले काठमाडौं यति घमाइलो होला भन्ने सपनामा पनि सोचेको थिइनँ, पर्यटन वर्ष २०११ मा पर्यटक लोभ्याउन तिमीहरूको न्यायोपना पनि एउटा गज्जबको कारण बन्न सक्नेछ।'
दुई सातापछि क्रिसमस मनाउन काठमाडौंमा पर्यटक आउन थालिसकेका छन्। तीन सातापछि शनिबारकै दिन अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु हुनेछ र पर्यटन वर्ष २०११ पनि। सरकारले सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखेको छ र दिनदिनै उनीहरूलाई लोभ्याउन नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। बुधबारमात्रै नेपाल पर्यटन बोर्डले गृष्मकालीन पर्यटन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ जसमा विदेशीका लागि नेपाल आध्यात्मिक गन्तव्य पनि बन्नसक्ने सम्भावना भजाउन खोजिएको छ।
दक्षिण जर्मनीको ब्ल्याक फरेस्टबाट काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सवमा सहभागी हुन '११ डिग्री' शीर्षक डकुमेन्ट्री बोकेर आइपुगेकी आना फ्रान्सेस एभ्याटले रापिलो ठमेलमा हनी लाट्टेको चुस्की मार्दै थपी, 'यहाँ आध्यात्मिक पर्यटनको पनि प्रसस्त सम्भावना रहेछ।' आनाको सहर ब्ल्याक फरेस्टमा अहिले कति जाडो छ भने तापक्रम जिरो डिग्रीभन्दा तल झरिसकेको छ।
उसका साथीहरू र बुबाले काठमाडौं धेरै चिसो छ, बाक्ला ज्याकेट लिएर जानू भनेका रहेछन्। यहाँ दिउँसो स्वेटरमात्र लगाए पुग्ने वातावरण देखेपछि आना दंगै परी, 'मैले त बुबालाई काठमाडौं धेरै न्यानो रहेछ भनेर इमेल लेखिसकेँ।' न्यानो उसलाई सहरमात्र होइन, यहाँका मान्छे पनि लागे। जो पनि हाँसेरै बोल्ने! भनी, 'नेपालीको मुस्कान पनि पर्यटक लोभ्याउने छ।'
आएको तीन दिनमै काठमाडौं र वरपरका केही मन्दिर र स्तुप घुमेर लोभिइसकेकी उसले संस्कृति र आध्यात्मिक खोजीका लागि घुमन्तेहरूलाई नेपालको सिफारिस गरी। आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि र तिक न्यान हानबाट प्रभावित आनाले भनी, 'पूर्वीय दर्शन अझ गहिरोसँग जान्न पनि नेपाल उपयुक्त ठाउँजस्तो लाग्यो।' ८४ वर्षे भियतनामी भिक्षु तिक न्यान हानलाई उसले गत वर्ष लन्डनमा भेटेकी रैछे।
भर्खरै स्कटल्यान्डको एडिनबरा कलेज अफ आर्ट्सबाट फिल्म र टिभीमा स्नातक सकेकी यो हँसिली युवती दुःखसुख पैसा जोरजाम गरेर काठमाडौं आएकामा अहिले आफैंलाई धन्यवाद दिइरहेकी छे। 'म मास्टर्स पढ्न आवेदनका लागि पैसा बटुल्दैथेँ, तैपनि काठमाडौं आउने मौका गुमाउन चाहिनँ, यहाँ आएपछि तिम्रो सहर यति विविधतापूर्ण र रमाइलो लाग्यो कि मैले सही निर्णयका लागि आफैंलाई धन्यवाद दिएँ,' उसले मादक मुस्कान छरी।
घुमफिर, सिनेमा र खोजीमा सानैदेखि रुचि राख्ने आनालाई एडिनबरापछि राम्रो लागेको सहर हो, काठमाडौं। 'एउटा मिलेको नाचजस्तो लाग्यो मलाई काठमाडौं, रंगीन, चलायमान, जीवन्त र सुरक्षित पनि,' उसले भनी।
आइरिस आमा र जर्मन बुबाकी कान्छी छोरी आनाले एडिनबरामा फिल्म स्नातक गर्दा धेरै कुरा सिकी। ५० हजार विद्यार्थी पढ्ने त्यो कलेजमा उसले जीवनका थुप्रै पाठ पढी। सुखसयल, राम्रो जागिर र सम्पन्न जीवनभन्दा पर पनि अनेकौं चिज हुँदा रहेछन् भन्ने जानी।
उसलाई लाग्यो- जर्मन बढी औपचारिक हुँदा रहेछन्! तर, आइरिस आमा हेलेन एभ्याटले उसलाई मनोविनोद, हासपरिहास र अध्यात्मका आरम्भिक पाठ पढाई। 'उहाँले मलाई कुवाको संसारबाट बाहिर निस्केर जीवनका रंगीन आयाम बुझ्न खुब प्रेरणा दिनुभयो,' चर्चित भारतीय नर्तकीसँग आफ्नो आमाको नाम जुध्ने थाहा पाएर दंग परेकी आना बोली।
शुक्रबार दिउँसो साढे तीन बजे पर्वतीय फिल्म महोत्सवस्थल राष्ट्रिय सभागृहमा उसको आठ मिनेट लामो डकुमेन्ट्री 'इलेभेन डिग्रिज' प्रदर्शन हुँदै गर्दा राजधानीको तापक्रम त्यस्तै एघार डिग्री सेल्सियस नै थियो अर्थात न्यानो र घमाइलो!
एडिनबराबाट दुई घन्टा उत्तर स्कट पहाडहरूमा वातावरणीय परिवर्तनको असरले हिउँ पग्लिँदै जाँदा स्की खेलाएर जीविका चलाउने गाउँलेलाई परेको असरबारे उसले गत वर्ष यो डकुमेन्ट्री बनाएकी हो। केही वर्षअघिसम्म जिरो डिग्री आसपास चिसो हुने ती स्कट पहाडहरूमा पहिलोपल्ट तापक्रम 'टु डिजिट' (एघार डिग्री) पुगेपछि स्की खेल्नेहरू पातलिएका छन् जसले आनालाई डकुमेन्ट्री बनाउन हौस्यायो। 'एघार डिग्री'पछि उसले बच्चाहरूको आनीबानीसम्बन्धमा १५ मिनेट लामो दार्शनिक डकुमेन्ट्री 'इन्टु द मिडल अफ नोह्वेर' बनाएकी छे जुन ग्वाङ्जाउ फिल्म महोत्सवमा यही महिना देखाइँदैछ।
'काठमाडौं पनि पहिलेभन्दा तात्दै गएको हो?' उसले सोधी र तत्कालै थपी, 'अहिलेभन्दा तातो त नहोस्, नत्र युरोपेली र अमेरिकी पर्यटक आकर्षित गर्न तिमीहरूलाई गाह्रो होला।'
नेपाल जति नै मन परे पनि फिल्म महोत्सवमा सहभागी हुन एक सातालाई मात्र आएकी आना अहिले आफ्नो बसाइ लम्याउन सक्दिन किनभने फिनल्यान्डको एउटा कलेजमा फिल्ममा मास्टर्स पढ्न खर्च जुटाउन र आवेदन हाल्न उसले आगामी महिना दौडधुप गर्नुपर्नेछ।
'तर, म पर्यटन वर्षभित्रै आध्यात्मिक खोजी, हिमाली भेगमा पदयात्रा र गाउँहरू हेर्न नेपाल आइछाड्नेछु,' आनाले हाँस्दै कुरा टुंग्याई।